Xusuusin iyo Barashada Abaalmarinta Jacaylka, Galmada iyo Internetka
Bogga ugu weyn Waxbarashada Xusuusta & Barashada
“Ujeedada xusuusta ma ahan inaan dib u xasuusano wixii tagay, laakiin waa inaan sii odoroso mustaqbalka. Xusuusta waa aalad lagu saadaaliyo. ”
Waa kuwan laba wada hadal oo TED ah oo ku saabsan awoodda barashada.
Kowaad waa borofisar Stanford Carol Dweck ku saabsan awoodda ay u leedahay in aan horumarin karno. Mawduucdiisu waxay tahay in "dadaalka iyo dhibka" ee isku daya in loola jeedo in nuuradeena ay samaynayaan xiriiro cusub markaanu baraneyno oo aan horumarino. Tani waxay markaa la socotaa rabitaanka si ay u caawiso dhismaha maaddada cows / neeroon ee kudka kore.
Midka labaad waa by Angela Lee Duckworth waxayna tixgelinaysaa doorka "mashquul" abuurista guusha.
Barashadu waa isbeddel ku dhaca dabeecadda ka dhalata khibrad. Waxay naga caawinaysaa inaan la jaanqaadno deegaankeenna. Qaboojinta caadiga ah waa nooc ka mid ah barashada oo mararka qaarkood loo yaqaan "Qaboojinta Pavlovian". Ku soo noqnoqodka dhawaaqyada jalaska iyo cuntada ayaa sababay in eeyga Pavlov uu candhuufo codka jalaska kaligiis. Tusaalooyinka kale ee qaboojinta Pavlovian waxay baranayaan inay dareemaan walaac:
1) Marka aad aragto nalalka booliska ku xiran muraayada indhahaaga; ama
2) Markaad maqashid maqalka xafiiska dhakhtarka ilkaha.
Isticmaalaha jilicsan ee caadiga ah ayaa laga yaabaa in uu kufsado jimicsiga galmada si uu u kormeero, u eego ficilada qaarkood, ama gujinta fiidiyowga si video ah.
Qaybtani waxay ku saleysan tahay waxyaabaha laga helo "Maskaxda ka soo koreysa ilaa hoose"Tilmaan bixineed oo furan oo ay soo saartay Jaamacadda McGill ee Canada. Waxaa aad loogu talinayaa haddii aad rabto in aad waxbadan ka barato.
Waxbarashadu waa hab nagu siinaya inaan hayno xogta la helay, xaaladaha (dareenka), iyo riyooyinka saameyn kara dabeecadeena. Barashada waa waxqabadka ugu muhiimsan ee maskaxda, kaas oo orgaankani si joogto ah u bedelayo qaabkeeda u gaarka ah si uu u noqdo mid ka tarjumaya waayo-aragnimooyinka aan helnay.
Barashada sidoo kale waxaa loo ekeysiin karaa qaabeynta, talaabada ugu horeysa ee habka xifdinta. Natiijadiisa - xusuusta - waa adkeysiga labadaba xogta taariikh nololeedka iyo aqoonta guud.
Laakiin xasuusta ma aha mid gebi ahaanba aamin ah. Markaad aragto shay, kooxo neurons qaybaha kala duwan ee maskaxdaada waxay ka shaqeeyaan macluumaadka ku saabsan qaabka, midabka, urta, dhawaaqa, iyo wixii la mid ah. Maskaxdaada ayaa markaa ka dib isku xiraysa kooxaha kala duwan ee qanjidhada, iyo cilaaqaadyadani waxay ka tarjumayaan aragtidaada sheyga. Markaa kadib, mar kasta oo aad rabto in aad xasuusato sheyga, waa inaad dib u dhistaa cilaaqaadyadan. Hawlgalka isbarbardhiga ah ee cortex-kaaga ujeeddo arrintaan, si kastaba ha ahaatee, waxay bedeli kartaa xusuustaada shayga.
Sidoo kale, nidaamyada xusuusta maskaxdaada, qaybaha macluumaadka ee go'doonsan ayaa lagu xafidaa si ka waxtar yar kuwa la xiriira aqoonta jirta. Markasta oo ay ururo badani ka dhexeeyaan macluumaadka cusub iyo waxyaabo aad hore u taqaanay, ayaa sifiican ayaad u baran doontaa. Tusaale ahaan, waxaad heli doontaa waqti sahlan oo aad ku xasuusato in lafta misigtu ay kuxirantahay lafta bowdada, lafta bowdyaha ee kuxiran lafta jilibka, hadaad horeyba u laheyd aqoonta aasaasiga ah ee jirka ama aad taqaanid heesta.
Khabiirada cilminafsiyeedka waxay aqoonsadeen dhowr arrimood oo saameyn ku yeelan kara sida hawlaha xasuusta waxtarka leh.
1) Heerka feejignaanta, feejignaanta, maqnaanshaha, iyo xoojinta. Dareemida waxaa badanaa la yiraahdaa waa qalabka waraaqo qoraya xasuusta. Fiiro saariddu waa aasaaska neuroplasticity. Feejignaanta taxaddir la'aanta waxay yarayn kartaa waxqabadka xusuusta. Waqtiga shaashadda badani wuxuu dhaawici karaa xusuusta shaqada oo soo saari kara calaamadaha ADHD. Waxaan hagaajin karnaa awooddeena xasuusta annaga oo sameynayna dadaal dib-u-habeyn ah oo aan ku soo celineyno oo aan la wadaagno macluumaadka Stimuli oo si aan qarsoodi lahayn u korinaysa badbaadada jir ahaaneed, sida eroticica, uma baahna dadaal miyir leh si uu uqalmo. Waxay u baahan tahay dadaal miyir leh si ay u sii wadato daawashada.
2) Dulsaarka, xoogga dhiirigelinta, iyo baahida ama daruuriga. Way sahlan tahay in la barto marka maadada ay nagu faraxsan tahay. Sidaa darteed, dhiirigelinta waa arrin kor u qaadaysa xusuusta. Dhallinyarada qaarkood oo aan marwalba ku fiicnayn maadooyinka lagu qasbay inay iskuulka ku qaataan waxay inta badan leeyihiin xusuusin cajiib ah oo ku saabsan tirakoobka ku saabsan cayaaraha ama website-yada ay jecel yihiin.
3) Qiimaha dareenka (dareenka) oo la xidhiidha maaddada in la xusuusto, iyo niyadda qofka iyo xoojinta shucuurta. Xaaladda shucuurteennu markay dhacdo dhacdo waxay si weyn u saameyn kartaa xusuusteenna. Sidaa darteed, haddii dhacdo aad u kacsan ama kacsan, waxaan sameyn doonnaa xusuus gaar ah oo muuqata. Tusaale ahaan, dad badan ayaa xusuusta meeshii ay joogeen markay wax ka barteen dhimashadii Princess Diana, ama ku saabsan weeraradii Sebtember 11, 2001. Falanqaynta dhacdooyinka shucuurta ku kacsan ee xusuusta waxaa ku jira norepinephrine / noradrenaline, neurotransmitter ah oo lagu sii daayo qaddarro badan markii waan faraxsanahay ama kacsan nahay. Sida Voltaire u dhigay, wixii qalbiga taabtaa xusuus baa ku xardhan.
4) Goobta, iftiinka, dhawaaqyada, urta… Marka la soo koobo, guud ahaan Macnaha guud taas oo calaamadeyntu ka dhacdo waxaa lagu diiwaan geliyaa macluumaadka lagu xafiday. Nidaamyadeena xasuustu waa sida caadiga ah. Sidaa awgeed, markaan dhibaato ka haysano xasuusashada xaqiiqo gaar ah, waxaa laga yaabaa in aan dib u soo celinno adigoo xasuusinaya halka aan ka baranay ama buugga ama bogga aan ka barannay. Miyuu ahaa sawir boggaas? Macluumaadku ma ahaa dhinaca sare ee bogga, ama hoose? Waxyaabahaas oo kale waxaa loo yaqaan "indexes". Sababtoo ah waxaan marwalba xasuustaa macnaha guud ee macluumaadka aan baraneyno, adigoo dib u soo celinaya macnaha ereyadan aan marar badan ku sameyn karno, ururo taxane ah, xasuusno macluumaadka laftiisa.
Badbaadinta waxay noo ogolaanaysaa in aan ka takhalusno qadarka warbixinta ee aan maalin walba qabaneyno laakiin in maskaxdeenna ay go'aamiso inaanan u baahnayn mustaqbalka. Hurdada ayaa caawisa habkan.
<< Barashadu waa Fure Xaaladda Galmada >>